के मोबाइल चलाउँदा हर्मोनमा समेत परिवर्तन आउन सक्छ ? – Health Post Nepal
के मोबाइल चलाउँदा हर्मोनमा समेत परिवर्तन आउन सक्छ ?
२०७५ असोज २० गते १३:५०
धेरै लामो समयसम्म मोबाइल चलाउँदा मोबाइलको रेडिएसनले मानिसलाई ठूलो रोगसमेत लाग्न सक्ने अनुसन्धानहरूले पत्ता लगाइसकेका छन् । आइसिएमआरको नयाँ अनुसन्धानले भने तपाईंलाई अचम्मित बनाउन सक्छ । अनुसन्धानको पहिलो चरणमा मोबाइन फोन धेरै प्रयोग गर्दा मानिसको शरीरभित्र जैविक परिवर्तन आउन सक्ने कुरा पत्ता लागेको छ ।
यो अनुसन्धान अझै पूरा भइसकेको छैन । तर, अनुसन्धानको सुरुवातमै मोबाइलको अत्यधिक प्रयोगले मानव शरीरका विभिन्न भित्री तत्वहरूमा परिवर्तन आउने देखिएको छ ।
एम्स र आइसिएमआरले संयुक्त रूपमा दिल्ली एनसिआरमा गरिरहेको एउटा अध्ययनले यो तथ्य पत्ता लगाएको हो । सन् २०१३ मा सुरु भएको अनुसन्धान २०१८ मा सकिनुपर्ने थियो । तर, अध्ययन पूरा हुन अझै ३ वर्ष लाग्ने अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन् । अनुसन्धानका लागि ४ हजार ५ सय व्यक्ति छनोट गरिएका छन् ।
अनुसन्धानको सुरुमा मोबाइल धेरै चलाउँदा मानिसमा बायोलोजिकल परिवर्तन हुन सक्ने पत्ता लागेको हो । एम्सका एक डाक्टरले मानिसको मोबाइलको अधिक प्रयोगले सुन्ने र ध्यान दिने क्षमतामा मात्र नभई रगत, हर्मोनमा समेत परिवर्तन आउने अनुसन्धानबाट देखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार लगातार आधा घण्टा, ३–४ घण्टा र त्योभन्दा बढी समय मोबाइल प्रयोग गर्ने गरी ३ प्रकारका मानिसलाई अनुसन्धानमा सहभागी गराइएको छ । पछिल्ला वर्षमा मोबाइलको प्रयोगले मानिसको प्रजनन क्षमतामा कमी आएको देखिएको छ ।